Umdlali we-saxophone waseMelika, u-Ernest Dawkins.
I-SOWETO EXCHANGE e-UKZN Jazz Centre
I-Centre for Jazz and Popular Music (i-CJPM) yase-School of Arts yethula iSOWETO EXCHANGE, okuyiqembu lomculo eliholwa wumdlali we-saxophone, u-Ernest Dawkins waseMelika, mhla ziyisithupha kuNhlolanja.
Lesi sihlabani sase-Chicago esishaya into ecokeme sizobe sidlala nezinye izihlabani zaseNingizimu Afrika.
U-Dawkins nabalingani badlala izingoma eziqanjwe yibo ezingahambelana nezijwayelekile emkhakheni kodwa eziyi-jazz.
Ibhendi yakhiwe odlala upiyano u-Alexis Lombre nodlala izigubhu u-Jeremiah Collier, base-Chicago, noshaya icilongo uThabo Sikhakhane waKwaZulu-Natali.
U-Dawkins uwugalagala lukathisha/lomfundisi nomsunguli wenhlangano engenzi nzuzo i-Live the Spirit. Ungenye yezingwazi zabashayi be-saxophone nabaqambi bezingoma emhlabeni. Uwusomabhizinisi onamava emkhakheni wokukhiqiza umculo ngobuchwepheshe obusha aphinde awudayise kwi-internet.
Unabangani abadala be-jazz eNingizimu Afrika, okubalwa kubo izingwazi uZim Ngqawana noFeya Fakun okungozakwabo abazisa kakhulu.
U-Lombre wumshayi-piyano we-jazz osemncane oya kude emkhakheni we-jazz. Ufunda e-University of Michigan, ngaphansi kweso elibukhali lika-Robert Hurst, oseke wazuza indondo i-Grammy Award. Njengoba akhulela eningizimu ye-Chicago, washeshe wabona ukuthi ‘umongo womculo awukho kulokho okuzwayo kodwa futhi usendleleni okuthinta ngayo umculo’. Ukholwa wukuthi ubizo lwakhe emculweni wukwenza umculo ‘uphile’.
U-Collier ungumshayi-zigubhu ocophelelayo, onekhono elisobala nocijwe wu-Dawkins. Ikhono lakhe esemncane lenza waqokelwa ukuyofunda e-Thelonious Monk Institute njengomunye wabafundi bezikhungo zamabanga aphezulu ezifundisa ngobuciko owayebuswa yi-jazz, behambe bejikeleza beyidlala kwamanye amadolobha.
USekhukhune wumholi webhendi yabaculi abayisithupha iThabo Sekhukhune, umdlali wezinsimbi nomfundi omdala wase-Durban Music School kanti kukude lapho ebheke khona njengomshayi-cilongo ovelele eNingizimu Afrika.
Amagama: ngu-Melissa Mungroo ;noThulile Zama
I-UKZN Ibalwa Namanyuvesi Ayikhulu Avelele
UKZN Hosts Successful 2019 Parents Day
Hard Work Pays Off for KZN Matriculant
Isiqengqe SikaMatikuletsheni Sangonyaka wezi-2018 Sikhethe i-UKZN
New Teaching and Learning Dean Aims to Enhance Academic Experience
School of Engineering Welcomes Top Matric Achievers
Importance of Impactful Research Promoted at Annual Research Day
Orientation for First Year Students
UKZN Alumnus Up for Farmer of the Year Award
UKZN Professor Inducted as Fellow of African Academy of Sciences
Swiss Funding for UKZN Researchers to Improve Food System Resilience
UKZN Carpentries Club Takes Off!
Alumnus Publishes Book on his Father – Legendary “Mad Mike”
Maths Programme for Bright Young Sparks Enters 8th Year
UKZN Celebrates World Town Planning Day
Jazz Student Performs Songs Based on Her Life
School of Life Sciences Hosts BRICS Collaborative Project Workshop
Abasubathi Base-UKZN Bavivele i-Comrades Marathon